လူမှုကွန်ရက်သို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမည်သို့ ၀ င်ရောက်သင့်သနည်း။ | Martech Zone
လူမှုကွန်ရက်သို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမည်သို့ ၀ င်ရောက်သင့်သနည်း။
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 21, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒါကအပိုင်းသုံးပိုင်းတွဲအပိုင်းရဲ့ ၂ ပါ။ အပိုင်း2ဖြစ်ခဲ့သည် ဘယ်အချိန်မှာကုမ္ပဏီလူမှုမီဒီယာသို့ရေငုပ်သင့်ပါတယ်? ဒီ post အတွက်နှောင့်နှေးမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါဟာအလုပ်မှာတစ်ပတ်လောက်ကြာပြီ - စီမံကိန်း ၃ ခုပြီးဆုံးသွားပြီ။
ပထမ post မှာအထူးဆွေးနွေးမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့လို့ပါ နက်ရှိုင်းသော Tech မှငုပ်မှာရှေးရှေးကနေ post:
သို့သော်ငါ Doug ၏ပြောဆိုချက်ကိုသင်ပထမ ဦး စွာလုပ်သင့်သည်၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၏မဟာဗျူဟာကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတို့သည်။ ? Indianapolis သည်အခြားဂြိုဟ်တစ်ခုတွင်ရှိနိုင်သည် (ဂျက်ဖ်၊ သင်ကကင်တပ်ကီမှဖြစ်သည်၊ သင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည်လူမှုရေးမီဒီယာကို Kumbaya သို့ရောက်ရှိရန်အချိန်နှင့်နားလည်မှုရှိသောနေရာတွင်ရှိသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ဆက်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ရန်မှာအဆင့်မြင့်သဘောတူညီမှုကိုဓားစာခံအဖြစ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအတည်ပြုချက်သည်အရေးကြီးသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မည်သည့်ခိုင်မာသည့် ROI ကိုမဆိုမီ။
ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ဤအချက်ကိုအမှတ်ရမိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် boardroom အဆင့်တွင်သဘောတူညီမှုရရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်စိတ်မဝင်စားပါ။ ကျွန်ုပ်စိတ်ပူမိသည်မှာကုမ္ပဏီ၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်သင်၏မဟာဗျူဟာကိုသင်၏စီးပွားရေးဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာမည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ထောင်ချောက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ရေးသားသူမှဆက်လက်
တစ် ဦး က start- သေးမဟာဗျူဟာတခါတရံနည်းလမ်းများစွာအတွက်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်လိုအပ်သမျှသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး၊ အလွန်စျေးသိပ်မကြီးသောကိရိယာများနှင့်သင်တိုင်းတာနိုင်သောဆက်သွယ်ရေးပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အသွားအလာများလာခြင်းကဲ့သို့အခြေခံကျနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်။ သို့မဟုတ်ပါကလူကြီးမင်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူအများကမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်အပျက်များအားပြောပြခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဤအရာသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားအမြန်စတင်ရန်နှင့် 'နက်တွင်းနက်ကော်မတီ' သို့သွားရန်အချိန်လုံလောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်းဤချဉ်းကပ်မှုသည်ရလဒ်ကောင်းများနှင့်ဆိုးဝါးသောရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီမဟာဗျူဟာ၏ငါမြင်အကောင်းဆုံးဥပမာမိတျဆှေဖြစ်ခဲ့သည် ခရစ် Baggottဘလော့ဂ် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခရစ်မှာပိုင်ရှင်ရော ExactTarget ရဲ့ Chief Marketing Officer ဖြစ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်အဲဒီအချိန်ကပြန်ခုန်ဖို့ပိုလွယ်ကူခဲ့တယ်။
ခရစ်၏ဘလော့ဂ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိမှာမေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်! မေးခွန်းမှာ၎င်းသည်၎င်း၏အပြည့်အဝအလားအလာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိဖြစ်စေ၊ တတျနိုငျသ ရှိသည်။ ခရစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ExactTarget စတင်ရန် Compendium Blogware (မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါခရစ်မူရင်းသဘောတရားကိုတီထွင်နိုင်အောင်ကူညီခဲ့တယ်။ ) သူကဒီအကြောင်းကိုမျှော်မှန်းလို့ပဲ။
Typepad မှာခရစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ blogging ကြိုးတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းစသည့်ဘလော့ဂ်၏အလားအလာကိုခရစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင်ဖယ်ရှားရန်အလွန်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည် Typepad နှင့်ဘလော့ဂ်အလတ်စား၏အပြည့်အဝအားသာချက်ယူပါ။ သူကနေရာတိုင်း၌သူနှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည် (သူသည်နံပါတ်တစ်ဖြစ်သည်။ ) အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်“ ExactTarget တွင်ခဲမျိုးဆက်အတွက်ခရစ်နှင့်ပေါင်းသင်းရန်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည့်အခြားစည်းကမ်းချက်များဒါဇင်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်ခုန်ပေါက်။ ဘလော့ဂ်စတင်ခဲ့သည့်နေ့ကိုသူနားလည်ခြင်းမရှိ။ သူသည်အခြားဘလော့ဂ်တွင်အဖွဲ့အစည်း၏ဘလော့ဂ်တွင်ပါ ၀ င်လိုသည့်သက်ရောက်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေလိုသည်။
ဒါကြောင့်လည်းငါဟာမင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွက်မှန်ကန်သောဆိုရှယ်မီဒီယာအကြံပေးများကိုရှာဖွေရန်ဤမျှကြီးမားသောထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး သည်သင်၏ကိရိယာများ၊ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီးသင့်နည်းဗျူဟာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောသင့်လျော်သောကိရိယာများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒေသခံလူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံများသည်လူမှုမီဒီယာအခင်းအကျင်းကိုလည်းသတိပြုမိပြီးသင့်ကိုကူညီနိုင်သည် ဘယ်မှာ သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာ execute ရန်, မရုံဘယ်လို။
သင်၏အိုင်တီကောင်လေးရှိနိုင်သည် WordPress ၅ မိနစ်အတွင်း (အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့် ၁ ခလုတ်တပ်ဆင်မှု) တွင်လည်ပတ်ခြင်း ဆိုလိုတာကသူကရှာဖွေရေးအင်ဂျင် crawlers အတွက်သင့်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသူသိလား။ အများဆုံးသက်ရောက်မှုအတွက် Permalink နှင့်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များကိုမည်သို့စီစဉ်ရမည်ကိုသူသိပါသလား။ ပလပ်အင်များသည်မည်သည့်အရာများရှိရမည်ကိုသူသိသလား။ မဟုတ်ပါ၊ မအောင်မြင်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကသူသည်အောင်မြင်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးစကားပြောခြင်းနှင့်ဘက် လိုက်၍ တိုင်ပင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ Open Source စိတ်ဓာတ်၏လှည့်စားမှုကိုခံရနိုင်သည်။
Open Source ကိုကြိုက်တယ်။ ငါ WordPress ကိုချစ်! ငါကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ပြည့်စုံသောလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုစတင်ရန်၎င်းကိုသုံးမည်လား။ Nope ။ WordPress သည်စာရေးသူဗဟိုပြုပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်၊ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကိုဗဟိုပြုသည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မဟုတ်ပါ။
များသောအားဖြင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များမဟုတ်ပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူတစ် ဦး စိတ်အားထက်သန်စည်းဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့ခြေထောက်ပေါ်စဉ်းစားပြီးငါတို့ပြောသောအခါအမှတ်တံဆိပ်ခြုံငုံမဟာဗျူဟာမကြာခဏရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုကို ၀ င်ရောက်ပြီး၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထိန်ထိန်လင်းစွာစတင်မည်ဆိုပါက BS Bingo အတွက်သီးသန့်ထားရှိပါသည်ဒါကအလိုအလျောက်ပါပဲ F။ အကယ်၍ သင်သည်ထွက်ခွာရန်မတောင်းဆိုပါကဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အဓိကနိယာမဖြစ်သောယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်သည့်အတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအားလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ပြင်ဆင်ပါ။
သင်၏အဖွဲ့အစည်းတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့်ကြီးမားသောကွန်ယက်တည်ဆောက်ထားသည့်လူများစွာရှိသည်။ သူများသည်သင်၏နည်းဗျူဟာတွင်သင်စုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့် connectors နှင့် influencers များပင်!
မည်သို့စတင်ရမည်ကိုနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးကို“ ကျွမ်းကျင်သူ” တစ်ခုတည်း၌မထားပါနှင့်။ အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ရှာဖွေနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြားခံကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုယခုအချိန်တွင်မျက်နှာပြင်ကိုစုပ်ယူနေကြသည်။ ဘယ်တော့မှ၊ မည်သူမျှ၊ လူတိုင်းကဲ့သို့အလွန်အစွန်းရောက်သည့်အသုံးအနှုန်းများကိုသတိပြုပါ။ သင်လောင်းကြေးမပေးသောနည်းဗျူဟာသည်သင်၏အကြီးမားဆုံးအနိုင်ရမှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
သင်၏စီးပွားရေး၊ သင်၏စက်ရုံ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများ၊ သင်၏နည်းပညာကိုမွေးစားခြင်းနှင့်သင်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအလယ်အလတ်အဆင့်တွင်သင်၏ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့အားသင်ကြားပေးနိုင်သောလူမှုရေးမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များကိုရှာပါ။
မည်သည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လူမှုမီဒီယာသို့ ၀ င်ရောက်သင့်သနည်း။
15:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 41 တွင်
Doug, ငါတို့သင့်ရဲ့စီးရီး၏အခြားအရစ်ကျကြည့်ဖို့ဝမ်းသာပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတူညီမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြေရှင်းသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများသည်မြေမြှုပ်မိုင်းများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောနည်းပညာလူအုပ်စုအတွက်အလွန်ကောင်းသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် စီးရီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှမ်းခြုံဆက်လက် McBruBlog အပေါ်ကျော်။ ကျနော်တို့အပိုင်း3မျှော်လင့်! - David